capacitor ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဣဇာက်သည် | | အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
အ capacitors များသည် passive အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သူတို့ကလျှပ်စစ်လယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့သည်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည်အရည်သိုက်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီမှာသာအရည်မဟုတ်ပါ၊ အီလက်ထရွန်များဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်စုဆောင်းရန် နှစ်ခုကူးမျက်နှာပြင် ယေဘုယျအားဖြင့်စာရွက်များ, ဤအရပ်မှဆလင်ဒါပုံဖော်ပတ်ရစ်နေကြသည်။ နှစ် ဦး စလုံးပြားအကြား interposed ဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး dielectric စာရွက်သို့မဟုတ်အလွှာ။ ၎င်း insulator တွင်ရှိသောစာရွက်သည် Capacitor ၏အားသွင်းမှုနှင့် ၄ င်း၏အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လုံလောက်မှုမရှိပါက၎င်းသည်ဖြတ်သွားသောလျှပ်စီးပြားတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့လက်ရှိစီးဆင်းနိုင်သည်။
1 တစ် ဦး capacitor စစ်ဆေးပါ
2 Capacitor အမျိုးအစားများ
တစ် ဦး capacitor စစ်ဆေးပါ
သင်ရွေးလိုက်ပြီသို့မဟုတ်တိုက်နယ်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေနောက်တစ်ခု အရေးအကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာမည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီအတွက် capacitor တစ်ခုခုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်သိနိုင်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Olfactory / အမြင်အာရုံစမ်းသပ်မှုဖြေ။ ။ တစ်ခါတလေ၊ သင်ကအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်၊ circuit ပျက်စီးမှုရှိ၊ မရှိသိနိုင်အောင်ရှူရှိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ခြင်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအနံ့ဖြစ်သည်။
ရောင်: capacitor ပြhasနာတစ်ခုရှိတဲ့အခါဒါဟာများသောအားဖြင့်အတော်လေးထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ capacitors တွေရောင်နေပြီးအထက်ပါပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမျက်စိမမြင်ဘဲမြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အခြားအချိန်များတွင်လျှပ်စစ်ဓါတ်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်အတူရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် capacitor ကမကောင်းဘူးဆိုတာပြတယ်။
အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ပန်းကန်ပေါ်မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်- အဆက်အသွယ်များအနီးအနားရှိသို့မဟုတ် capacitor ကိုဂဟေဆက်ထားသောပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်ပေါ်ရှိအမှောင်ထုသည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ multimeter သို့မဟုတ် multimeter နှင့်အတူစမ်းသပ်ပါစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှု: သင်က capacitor ၏ capacitance ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောစကေးအပေါ် capacitances တိုင်းတာရန် function ကိုအတွက် multimeter ထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် multimeter ၏စမ်းသပ်မှုကို capacitor ၏ connection နှစ်ခုသို့ထည့်ပြီးဖတ်ထားသောတန်ဖိုးသည် capacitor ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နီးစပ်မှုရှိသလားကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အခြေအနေကောင်းသွားလိမ့်မည်။ အခြားဖတ်ပြaနာတစ်ခုပြသပါလိမ့်မယ်။ သတိရရမယ်ဆိုရင်အနီရောင်ဝါယာကြိုးဟာ capacitor ရဲ့အရှည်ဆုံး pin ကိုသွားရမယ်။ အနက်ရောင်ဝါယာကြိုးကဝင်ရိုးစွန်း capacitor ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအခြားသူတွေဆီကနေဘယ်လိုမှအရေးမကြီးဘူး။
Short circuit test: တိုတောင်းတယ်ဆိုတာသိရန် multimeter ကိုခုခံမှုကိုတိုင်းတာရန် mode ထဲမှာထားနိုင်သည်။ သင်က 1K သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအကွာအဝေး၌ထားရမည်။ အနီရောင်ကို polar capacitor ဖြစ်လျှင်၊ အနက်ရောင်ကိုအတိုဆုံးနဲ့အရှည်ဆုံး terminal ကိုသင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင်တန်ဖိုးတစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုဆောင်အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်ပြန်ထည့်။ ထပ်ရေးပါသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုမှတ်ထားပါ။ ဤကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပါ။ အခြေအနေကောင်းလျှင်ညီမျှသောတန်ဖိုးများကိုသင်ရရှိသင့်သည်။
voltmeter နှင့်အတူစမ်းသပ်ပါ: ဗို့အားကိုတိုင်းတာ၏ function ကိုသတ်မှတ်။ ဥပမာအားဖြင့် capacitor ကိုဘက်ထရီဖြင့်အားသွင်းပါ။ ၎င်းသည်အနိမ့်ဗို့အားဖြင့်အားသွင်းသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 25v capacitor ကို 9v battery ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သော်လည်း၊ မှတ်သားထားသောပုံထက်မကျော်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်ချိုးလိုက်လိမ့်မည်။ အားသွင်းပြီးသည်နှင့်ဗို့အားမီတာအသုံးချနည်းကိုစစ်ဆေးပါ၊ အားသွင်းသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သို့ဆိုလျှင်အဆင်ပြေမည်။ အချို့က multimeter မသုံးပဲစမ်းသပ်မှုလုပ်ပြီး capacitor ၏ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကြားရှိဝက်အူလှည့်အစွန်ကိုထည့်ပြီးအားသွင်းပြီးနောက်မီးပွားဖြစ်ပေါ်လျှင်စောင့်ကြည့်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမအကြံပြုပါ။
ကြွေ capacitors သည်ဤပြtheseနာများတွင်ပြthereနာရှိသည့်အခါအခြားသူများကဲ့သို့မထင်ရှားနိုင်ပါ။ ဒီဟာတွေမရောင်ဘူး သို့သော်စမ်းသပ်မှုများမှာဆင်တူသည်။
ခုခံတိုင်းတာရန် function ကိုအတွက် Polymeter: သင်ကြွေ capacitor ၏တံသင်မဆိုအပေါ်အကြံပေးချက်များကိုမဆိုကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း capacitors ၏ capacitance နိမ့်ကျမှုကြောင့် 1M ohm သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာရှိသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိပါက၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တန်ဖိုးကိုအမှတ်အသားပြုပြီးလျင်မြန်စွာကျဆင်းသင့်သည်။ တန်ဖိုးသည်သုညသို့သုညသို့မရောက်မှီအထိယိုစိမ့်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Capacitor testerအကယ်၍ သင့်တွင်ဤကဲ့သို့သောကိရိယာရှိပါကသို့မဟုတ်ပါက capacitors များအနေနှင့်၎င်း picoFarads စကေးအတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာနိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုအားသွင်း။ သင်၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးရန်အားသွင်းနိုင်သလားဆိုတာစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် Capacitor ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောပမာဏနှင့်တူညီသောစွမ်းရည်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် OK ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဟာတွေကအများဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုရင်သင်သိသင့်တယ် ဤအ capacitors များသောအားဖြင့်ခံရကြောင်းပြproblemsနာများကို:
အဝေးမှ: ကတိုသောအခါဖြစ်ပါတယ်။ nominal ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဗို့အားထက်ကျော်လွန်သွားပြီး၎င်းတို့အား၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၄ င်း၏ armatures များအကြားအက်ကွဲသွားသောအခါ capacitor သည်ဤပြproblemနာကိုခံရလိမ့်မည်။ ပျမ်းမျှအားခံနိုင်ရည်သည်သုညနှင့်နီးသောအခါသို့မဟုတ် breakout ကိုပြသည်။ ပျက်စီးသွားသော capacitor ၏ခုခံမှုသည်ဘယ်တော့မှ2ohms ထက်မကျော်လွန်ပါ။
Corte: တ ဦး တည်းသို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးတံသင်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ် armatures ကနေအဆက်ပြတ်သောအခါ။ ဤကိစ္စတွင်ဝန်ကို load လုပ်၍ တိုင်းတာသောအခါတန်ဖိုးသည်သုညနှင့်ညီသည်။ ၎င်းကိုမဖွင့်ပါကသိသာထင်ရှားသည်။
dielectric အလွှာအတွက်ချွတ်ယွင်းအကယ်၍ ဝန်စုစုပေါင်းသည်စုစုပေါင်းမပါလျှင်၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ လျှပ်ကာအလွှာများနှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ဟုသံသယဝင်ရသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအိပ်ဇောလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ သင်က Capacitor ကိုအားသွင်းပြီး voltage ကိုတိုင်းတာသောအခါ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကမြန်လွန်းစွာလုပ်ပါက၎င်းသည်ထွက်ရှိမှုနှုန်းမြင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အခြားသူများကို- တစ်ခါတစ်ရံတွင် Capacitor သည်ကြည့်ကောင်းနေပြီး၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစမ်းသပ်မှုအားလုံးပြီးသွားပြီ၊ သို့သော်၎င်းကို circuit ထဲသို့ထည့်သောအခါအလုပ်မလုပ်ပါ။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများအဆင်ပြေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ capacitor တွင်ရှာဖွေရန် ပို၍ ခက်ခဲသောပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းရောက်ရှိနေသောအပူချိန်များကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပါကကောင်းလိမ့်မည်။
မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် မင်းရဲ့အနာဂတ် capacitors ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ...
capacitor အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုသိခြင်းသည်ကိစ္စတစ်ခုစီ၌သင်မည်သည့်အရာကိုလိုအပ်သည်ကိုသိရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် DIY များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာမှာ -
Mica condenser: mica သည်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနည်းသော၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းသို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သောအသုံးချခြင်းများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
စက္ကူ capacitorဖြေ - သူတို့ကဈေးပေါတယ်၊ ဖယောင်းစက္ကူတွေသုံးပြီးစက္ကူတွေကိုသုံးပြီး insulation လုပ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်လျှပ်စီးပတ်လမ်းနှစ်ခုစလုံးကြားရှိတံတားတစ်စင်းထိုးခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူထိုးဖောက်နိုင်သည် သို့သော်ယနေ့တွင် Self-healing capacitors များရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်ဖောက်ထားသည့်အခါပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် application အများစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖောက်။ ဖောက်သောအခါသံကြိုးကြားရှိမြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆမှာတိုတောင်းသောcircuitရိယာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအလူမီနီယမ်အလွှာကိုအရည်ပျော်စေပြီးလျှပ်ကာကိုပြန်လည်ထူထောင်သည်။
Electrolytic capacitorဖြေ - အဲဒါကို applications အတော်များများအတွက်သော့ချက်အမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့၊ သူတို့ကိုတတိယလျှပ်စီးစီးဆင်းမှုနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး။ စဉ်ဆက်မပြတ်သာလျှင်၎င်းတို့ကို polarize ကိုမပြောင်းလဲစေရန်သတိပြုပါ၊ ၎င်းသည်လျှပ်ကာအောက်ဆိုဒ်ကို ဖျက်ဆီး၍ တိုတောင်းသော circuit ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းပင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီ capacitors အမျိုးအစားထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ electrolyte ပေါ်မူတည်ပြီး subtypes တော်တော်များများကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဥပမာ aluminium and boric acid dissololyte (ပါဝါနှင့်အသံဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်); အကောင်းဆုံးစွမ်းရည် / အသံအတိုးအကျယ်အချိုးအစားရှိတမ်တာလမ်များ၊ နှင့်လျှပ်စီးကြောင်းများအတွက်အထူးစိတ်ကြွသူမြား (သူတို့သိပ်မကြာခဏမရှိကြပေ) ။
Polyester သို့မဟုတ် Mylar capacitor: သူတို့သည်သံချပ်ကာအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်အလူမီနီယမ်ကိုငွေဖြည့်သည့်အပေါ်တွင် polyester ၏ပါးလွှာသောစာရွက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤစာရွက်များကိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ရန်ပုံထားပါသည်။ အချို့သောမျိုးကွဲများမှာလည်းပိုလီကာဗွန်နိတ်နှင့်ပလပ်စတစ်ကိုသုံးသည်။
Polystyrene condenser: Siemens မှ Styroflex ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းတို့ကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရေဒီယိုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ကြွေ capacitors: သူတို့ကကြွေထည်များကို dielectrics အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
Variable capacitors: ၎င်းတို့တွင် dielectric ကိုပြောင်းလဲရန်ရွေ့လျားနိုင်သော armature ယန္တရားတစ်ခုရှိပြီးထိုထက်ပိုသောအားဖြင့်နည်းသောအားသွင်းမှုကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသော resistors သို့မဟုတ် potentiometers တူသည်။
capacitor တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုခြားနားသောအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် စွမ်းရည်, ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သိုလှောင်နိုင်သည့်စွမ်းအင်ပမာဏဖြစ်သည် အတွင်းပိုင်း။ ဒါဟာ Farads အတွက်တိုင်းတာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် millifarads (သို့) microfarads များတွင်၊ သိုလှောင်ထားသောလူကြိုက်အများဆုံးပမာဏမှာသေးငယ်သည်။ သို့သော်သင်သိထားသင့်သည်မှာကြီးမားသောအရွယ်အစား၊
စွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်တွင်အနည်းငယ်ရှိသည် အရောင်နှင့် / သို့မဟုတ်ဂဏန်းကုဒ်များresistors နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့။ ထုတ်လုပ်သူများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်သင်ဝယ်ယူထားသော capacitor နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်စာရွက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အခြားအတော်လေးလက်တွေ့ကျသော web app များလည်းရှိသည် ဒီကဒီမှာ သင်အတွက်ကုဒ်ထားကြောင့်စွမ်းရည်တွက်ချက်ထားတဲ့အတွက်။
ဒါပေမယ့် capacitor ရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကသင့်ကိုမကန့်သတ်သင့်ပါဘူး။ ငါသူတို့ပလပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလို အပြိုင်သို့မဟုတ်အမှတ်စဉ် resistors လိုပဲ။ သူတို့လိုပဲ, သင်ကသူတို့အများအပြားအများအပြားချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းစွမ်းရည်သို့မဟုတ်အခြားရလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် ဝဘ်ရင်းမြစ်များ အပြိုင်နှင့်စီးရီးအတွက်အောင်မြင်စုစုပေါင်းစွမ်းရည်တွက်ချက်ရန်။
အပြိုင်ချိတ်ဆက်သောအခါ, သူတို့သည်တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ စွမ်းရည်တန်ဖိုးများ အဆိုပါ capacitors ၏ farads ၌တည်၏။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုစီးရီးများချိတ်ဆက်သောအခါ capacitor တစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းရည်၏ပြောင်းပြန်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်စုစုပေါင်းစွမ်းရည်ကိုတွက်ချက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလက်ရှိ capacitors များထဲမှ ၁ / C1 + 1 / C1 + ... သည် C သည်တစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတုန့်ပြန်မှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်စီးရီးများရှိပါက၎င်းတို့သည်ပေါင်းလိုက်ပြီးအပြိုင်ပါရှိလျှင်၎င်းသည်သူတို့၏ခံနိုင်ရည်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် (2 / R1 + 1 / R1 + …) ။
သင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် သင်က Capacitor တွေသုံးတော့မယ့်ပရောဂျက်တစ်ခုလုပ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာသင့်မှာဒီဇိုင်းရှိပြီးသင်လိုချင်တာကိုကောင်းစွာသိပြီဆိုရင်၊ သင်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုတစ်ခု၊ စစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုပါက၊ ၎င်းတို့အားအချိန်ကိုက်ရန် 555 ဖြင့်အသုံးပြုပါ။ စသည်ဖြင့်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်တွက်ချက်မှုများအရသင်လိုချင်သောအရာပေါ်မူတည်သည်။ အောင်မြင်ရန်စွမ်းရည်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်ဘယ်လောက်စွမ်းရည်လိုအပ်ပါသလဲ။ သင်လိုချင်သောဆားကစ်ပေါ် မူတည်၍ သင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစွမ်းရည်တစ်ခုကိုတွက်ချက်လိမ့်မည် (အကယ်၍ သင်တစ်ခုထက်ပိုသောဆက်တိုက်သို့မဟုတ်အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ) ။ စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ သင်ကျေနပ်အားရသူများကိုသာစီစစ်နိုင်သည်။
သငျသညျအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောမျိုးဗို့အားနှင့်အတူသို့မဟုတ် alternating current နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သွားပါသလား? အကယ်၍ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသော polarizations (သို့) alternating current ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက polarization ကိုမပြောင်းလဲစေရန်ကြွေ capacitor (သို့) polarized မဟုတ်သောအရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပို polarization ကိုပြောင်းလဲပါကချိုးဖောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲနေတဲ့ current ကိုသာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုချင်ပါသလား။ ထို့နောက် electrolytic များကဲ့သို့ကြွေမဟုတ်သော high capacitance capacitor ကိုရွေးပါ။
သငျသညျသာတိုက်ရိုက်စီးဖြတ်သန်းချင်ပါသလား? သင်က Capacitor ကိုမြေပြင်နှင့်အပြိုင် (GND) ထားနိုင်သည်။
ဘယ်လောက်ဗို့အား? capacitors သည် voltage limit ကိုခံနိုင်သည်။ သင်အလုပ်လုပ်မည့်ဗို့အားကိုကောင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင်လိုအပ်သည့်အကွာအဝေးတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သော capacitor ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်အရာကိုမရွေးချယ်ပါနှင့်၊ ဒါ့အပြင်သင့်မှာအခွင့်အလမ်းနည်းပါးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ဟာကြာကြာခံပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို သင်၏အနာဂတ် capacitor ကိုရွေးချယ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » capacitor ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ
ဟဲကျွန်ုပ်တို့တွင်တိုတောင်းသော circuit ကိုစမ်းသပ်မည့် capacitor ရှိခြင်းနှင့် capacitor သည်စာဖတ်ခြင်းကိုပေးသည်။ စာဖတ်ခြင်းသည်အနိမ့်အမြင့်မကျဘဲဆက်သွားနေပြီး voltmeter ၏အကြံဥာဏ်များကိုလဲလှယ်သည်။ အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်သည်နှင့် capacitor မှားသွားလိမ့်မည်။
သင် multimeter selector ပေါ်တွင်သင့်လျော်သောပြင်းအားအသုံးပြုနေပါသလား? သို့မဟုတ်အခြားယူနစ်များကိုတိုင်းတာရန်ဗို့အားမီတာတစ်ခုသည်လုပ်ဆောင်မှုမရှိသလော။
Sergio del Valle Gomez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာပျက်စီးနေတဲ့ 1200mf 10V capacitor ရှိတယ်။ ငါ 1000mf နှင့် 16V ထည့်သွင်းရန် 250mf နှင့် 16V တ ဦး တည်းနှင့်အတူ 1250mf 16V ၏အခြားတ ဦး တည်းနှင့်အတူအပြိုင်နှင့်အတူအစားထိုးနိုင်သလား?
Sergio del Valle Gómezအားပြန်ပြောပါ
ဖြစ်နိုင်ပါက၊ တန်ဖိုးကိုထပ်ပေါင်းထည့်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဗို့အားရှိခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။
74hc595: အားလုံးသည် shift မှတ်ပုံတင်ခြင်း IC အကြောင်းကို